Shelf iyo laambada IKEA Symfonisk Speakers shelf iyo laambada wadashaqeynta Sonos | Waxaan ka socdaa mac
Ku hadla tayada iyo waafaqsanaanta AirPlay 2 ayaa run ka ahaa IKEA dhawr bilood. Waxay ku lahaayeen kuwan ku hadla buugooda wax soo saar muddo dheer runtiina waxaan dhihi karnaa inay ahaayeen kuwa wax iibiya ugu wanaagsan iyada oo ay ugu wacan tahay qiimaha ay lacagta kuxiratay inta ugu badan.
Mid ka mid ah ku hadlahani wuxuu u shaqeeyaa sida buug-gacmeed kan kalena sida laambad., laakiin sida iska cad labaduba waxay ku daraan runtii maqal aad u fiican oo Sonos na caadaystay. Waxaan dhihi karnaa labadoodaba waxay isku daraan meelkasta oo gurigeenna ama xafiiskayaga ah, haddaba aan aragno iyaga.
Runtu waxay tahay inaan dhihi karno taas IKEA waxay si buuxda u soo geleysaa adduunka qalabaynta guryaha xaaladduna markay tahay laambadda afhayeenka oo ay weheliyaan shelf shelf ayaa ku habboon kuwa kuwa soo rogaya tikniyoolajiyadan guriga. Indhooleyaal caqli-gal ah, laambadaha af-hayeenka oo koontaroolaya Siri, iPhone ama Mac mahadnaqa HomeKit, iwm - Iina Vuorivirta, Naqshadeeye IKEA, ayaa ku leh bogga rasmiga ah:
Waxaan ka warqabnay bilowgii inaan dooneynay inaan la tartano bilicsanaanta dhaqanka ee tikniyoolajiyadda sare. Hadalka laambaddu wuxuu ka bilaabmaa fikradda dabka qaab gaar ah: hal cunsur oo soo saarta iftiin diiran iyo dhawaq isla waqtigaas.
Dhinaca kale Sonos VP ee Naqshadeynta Tad Toulis, Sharax:
Wadashaqeyntan ayaa had iyo jeer lagu gartaa qiiro, qiyam iyo aqoon ay wadaagaan labada shirkadood. IKEA iyo Sonos waxay aqoonsan yihiin muhiimada codka wanaagsan iyo awooddiisa abuurista saameyn togan nolosha guriga.
1 Isku xirnaanta Wi-Fi fudud oo dhakhso leh
2 Hadalka laambadda oo leh dhar madow ama caddaan ah oo daboolaya
3 La jaan qaada Siri, Alexa iyo Kaaliyaha Google
4 Hadalka shelf shelf ee Symfonisk wuxuu u adeegaa inuu waxyaabo korka saaro
5 Qiimaha runtii waa adag yahay
Isku xirnaanta Wi-Fi fudud oo dhakhso leh
Waxa ugu horeeya ee aan ubaahanahay waa iPhone si aan ulaxiriirno kuwa kuhadlaya waana in Wi-Fi uu yahay wadada aan kuxireyno. Waxay ku daraan fiilo Ethernet ah gudaha laakiin muhiim ma ahan in la isticmaalo maadaama barnaamijka Sonos, aan awoodno isku xir labada Symfonisk si fudud oo dhaqso leh.
Adoo furaya barnaamijka Sonos ee kujira iPhone-ka isla markaana si fudud laambada ama shelf ugu ridaya meel laga baxo, Waxay tilmaamaysaa talaabooyinka ay tahay inaan raacno. Runtii way fududahay oo way fududahay in la isku xiro laakiin waa inaan maanka ku haynaa in laambadda inaan u aamusno oo aan sameyno dhaqdhaqaaqyo taxane ah qolka dhexdiisa si ay u ogaato meesha ay ku taal.
Hadalka laambadda oo leh dhar madow ama caddaan ah oo daboolaya
Badhanka gacanta ayaa la heli karaa si uu nalka u shido una damiyo, tani waa muhiim maadaama aaladaha casriga oo dhami aysan lahayn. Sida iska cad waxaan u isticmaali karnaa guluubka caqliga leh ee 'IKEA smart smart' oo leh naqshadda E14 ee ugu badnaan 7W, kuwani waxay noqon lahaayeen kuwa dunta yar yar. Guluubka kuma jiraan sanduuqa.
Hadalka laambada miiska wuxuu leeyahay dhar qurux badan oo daboolaya kaas oo bixiya naqshad qurux badan sidoo kalena ilaaliya afhayeenka laftiisa. Qeybta hoose, salka laambaddu waxay leedahay xarigyo caag ah si uusan u gariirin waqtiga loo ciyaarayo. Xarka korontada waxaa ku daboolan maro runtii iska caabin ah oo sidoo kale muujinaysa daryeelka qaabeynta qalabkan ka socda IKEA iyo Sonos.
La jaan qaada Siri, Alexa iyo Kaaliyaha Google
Iyadoo ay run tahay dadka ku hadla IKEA ma haystaan ​​makarafoonno Waxaan u adeegsan karnaa iPhone ama qalab kale (Echo, iwm.) Si aan muusig ugu saarno laambadda ama qaabka shelf ee IKEA. Fududeynta adeegsiga nalka oo leh guluub caqli badan oo ku xiran isla markaana si deg deg ah uga ciyaareyno muusigeenna meel kasta oo guriga ka mid ah waa wax cajiib ah Waxay sidoo kale la xiriiraan inta hadleysa ee aan kaheleyno shirkada Sonos sidaa darteed waxaan guryaheena kula dejin karnaa jawi muusiko oo qurux badan kuwa ku hadla IKEA.
Hadalka shelf shelf ee Symfonisk wuxuu u adeegaa inuu waxyaabo korka saaro
Sonos wuxuu dhigayaa codka iyo IKEA qaabeynta. Xaaladdan oo kale, waxa aan haysanno ayaa ah naqshad dhab ah oo loo yaqaan 'minimalist design' oo leh awood cod oo ah heerka Sonos. Xaaladdan oo kale, qalabyada laguma darin inay barroosinka ku hadlaan derbiga, taageeradani waa wax ay tahay inaan si gooni ah u iibsanno iyo Waxaan si cad uga helnaa dukaamada jirka ama websaydhka IKEA oo leh qiimo dhan 10 euro.
Waxaan dhihi karnaa kuhadalkan sheybaarka buugyaraha waa ikhtiyaar aad ufiican meelaha aan ubaahanahay boos mana heli karno miis yar ama wax lamid ah Awoodda inaad ku hadasho afhayeenka darbiga waa u fiican yahay adeegsadayaal badan kiiskan sidoo kale qaabkeeda oo taxaddar leh macnaheedu waa in meel kasta la dhigi karo iyada oo aan tan laga soo qaadin, halkii laga soo horjeeday.
Qiimaha runtii waa adag yahay
Waxaan ku bilaabaynaa laambada qiimaheedu yahay 179 euro iyo Symfonisk buugaagta lagu iibiyo Sonos oo kuhadlaya qiimahiisu waa 99 euro. Labada sheybaaba waa ikhtiyaar aad ufiican hadiyad ahaan ciidahan tan iyo Bixiyaan fursado aysan ku hadlin kuwa kale ee caadiga ah. Caqli ahaan, tayada maqalka ee aan ku celinayno inay tahay Sonos, sidaa darteed shaki la'aan waa heerka wax soo saarka mana u baahna awood. Badeecad wareegsan oo ay IKEA iyo Sonos ku faanaan.
IKEA Symfonisk Sonos ku hadla
Hadalka tayada maqalka
Laba dhammeystir cad ama madow
Badhanka korontada laambaddu waa dhinaca oo ma xuddun
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » IKEA Symfonisk ku hadla buugaagta iyo laambad iyadoo lala kaashanayo Sonos
Sida loogu beddelo RAW, CR2 ama qaab la mid ah JPG qaab fudud